Göteborg oo xarun u noqon doonta hayadda sinnaanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo soo ban-dhigtay goobta ay hayadda sinnaantu ka howl-geli doonto. sawir: Anders Wiklund/TT
Göteborg oo xarun u noqon doonta hayadda sinnaanta
Hayadda cusub oo albaabada loo furi doono jannaayo 2018
La cusbooneeyay torsdag 15 december 2016 kl 11.15
La daabacay torsdag 15 december 2016 kl 10.10
Bishii septeembar, xilligii lagu guda jiray diyaarintamiisaaniyadda dayrta ayay dawladdu shaaca ka qaaday inay ku talo jirto sidii ayku abuuri lahayd hayadda sinnaanta.
Tallaabadan ayaa ka dambeeysay iyada oo ay dawladda ula muuqatay in nhowlaha sinnaantu ay maanta u qayb-san tahay qeybo yaryar. Iyadoona howlaha hayadda cusub ee sinnaantu noqon doonto sidii ay isugu duwi lahayd islamarkaana daba-gal ugu sameeyn lahayd siyaasadda iyo howlaha sinnaanta.
– Waxay ila tahay in su’aal sidan u ballaaran ee la xiriirta siyaasadda loo baahan yahay sidii loo caddeeyn lahaa iyo hoggaan wanaag-san oo ay yeelato. Sidoo kale in la ogsoon yahay cidda ay masuuliyaddu ka saaran tahay hir-gelinteeda ee loo raacan karo, sida ay sheegtay wasiirka sinnaanta Åsa Regnér .
Warar soo gaaray laanta wararka Ekot waxaa lagu caddeeyay inay magaalada Göteborg noqon doonto xarunta sal-dhigga u noqon doonta hayadda cusub ee sinnaanta.
Hayadda ayaa howlaheeda bilaabi doonta bisha jannaayo ee sannadka 2018. Iyadoona oo ay wasiirka sinnaanta Åsa Regnér ay maanta ammuurtaa ku soo ban-dhigi doonto.
Magaalooyinka Örebro iyo Umeå ayaa tartanka qayb ka ahaa sidii ay xarun ugu noqon lahaayeen hayadda iyagoona soo ban-dhigay cilmi-baaristooda la xiriirta sinjiga. Halka ay magaalada Gotland oo iyaduna tartanka dhankeeda ka ahayd ku andacoonaysay kartida ay magaaladu u leedahay sidii ay ku howl-gelin lahayd howl-wadeenno ka soo dhalaali kara howlaha hayadda.
Hase yeeshee su’aasha la xiriirta abuurista hayadda sinnaanta ayaan ahayn mid aannu muran ka taagnayn. Xisbiyada Väsnter (V) iyo Miljöpartiet (MP) ayaa ku cadcaddaa sidii hayad noocaasi ah albaabbada loogu furi lahaa. Xisbiga Liberalerna (L) ayaa mabda’ ahaan taabac-san dhismaha hayadda sinnaanta, hase yeeshee diiddan habka ay dawladdu ku talo jirto inay u maareeyso.
Xisbiga Sverigedemokraterna iyo dhammaan xisbiyada kale ee garabka midig ayaa ka soo hor-jeeda abuurista hayadda sinnaanta. Af-hayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna (M) Ulf Kristersson ayaa mar uu ka qayb qaadanayay dooddii miisaaniyadda ee xilliga dayrta sheegay in dhismaha hayadda sinnaantu tahay howl summad ahaan loo qabto middii ugu liidatay.
– Howsha hayaddu noqon mayso mid wax u tarta gabar 13-jir ah ee faqooq lagaga sameeyay aaladda internet-ka. Howsha hayaddu noqon meeyso mid muujisa gabar 16-jir ah ee kubbadda cagta ciyaarta sida ay wiilasha dhiggeedu u muuqdaan. Waa howl summad ahaan un loo qabtay oo maalaayacni ah. Waxaa jira howlo ka badan oo wax-qabad u baahan, sida uu sheegay Ulf Kristersson, af-hayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga M, mar uu ka qayb qaadanayay dooddii miisaaniyadda ee xilligii dayrta oo ka dhacday xarunta baarlamanka 20-kii bishii septeembar 2016 september.